Dr Fidy Bariniaina “Mafy hery fiarovana ny Afrikanina!”
Ao anatin’ny vanim-potoanan’ny hoe tsy maintsy manalefaka ny fihibohana ny fitondram-panjakana, hoy ny Dr Fidy Bariniaina.
Izay aloha izany no zakan’ny zava-misy ara-toekarena sy sosialy eto. Raha mijery ny tarehimarika koa dia tsy mihetsika firy ilay aretina ka solon’ny fihibohana noho izany ny fanaovana arovava. Antony maromaro no fahitako ilay fahafahan’ny afrikanina mandresy ilay aretina dia satria any Eoropa misy ambanin’ny 0 degre aza ny ririnina. Ny aty amintsika mbola mafana na ririnina aza. Ny olona any efa lehibe ny ankamaroany. Tsy dia mampiasa vatana mihoatra ny afrikanina ny eoropeanina sy amerikanina. Ny ankamaroan’ny sakafo ho aniny dia efa voahodina daholo. Ny antsika mihinana voatabia sy voankazo mbola ahitana ny singa ilaina rehetra satria mbola manta. Zatra fanafody ny tandrefana fa ny afrikanina tambavy no tena ho aniny ary mampitombo ny hery fiarovana ao anatiny, hoy izy. Ny tontolo iainana koa samihafa satria tsy mahita lanitra manga fa setroka ny tandrefana. Azo lazaina ho mafy hery fiarovana noho izany ny afrikanina, hoy ity mpitsabo ity, saingy mila mitandrina sy manaraka toromarika hatrany satria mahafaty ny COVID 19.